Waldaan 'Hitsaanaat Aambaa' guyyaa dhaloota Koloneel Mangistuu kabajuuf - BBC News Afaan Oromoo
Waldaan 'Hitsaanaat Aambaa' guyyaa dhaloota Koloneel Mangistuu kabajuuf
Image copyright Amba Idir FB
Waldaan 'Hitsaanaat Hambaa' sagangaa guyyaa dhaloota Koloneel Mangistuu kabajuufi galata dhiyeessuu Wixata dhuffuf qophaa'aa akka jiran walitt-qabaan walidichaa Joonii Margaa BBC'tti himeera.
Kanaan dura ifatti guyyaa dhaloota isaanii kabajanii akka hin beekne yaadachuun bara kana ammoo maaltu akka kabajaniif akka waldaa kana kakaase ibsu.
Ji'a tokkoon dura namni 'Hitasaanaat Hambaa' kanatti guddateefi miseensa ta'e tokko Koloneel Mangistuu arguudhaaf biyya isaan itti baqatanii jiranitti deemuuf ka'a. Namni kun akka maqaan isaa dha'amu kan hin barbaanne ta'ullee kan inni deemuuf barbaadeef Koloneel Mangistuu waliin gaaffiffi deebii taasisuudhaaf ture.
Isaan argachuudhaaf to'annaafi eegumsi jiru baayyee cimaa ta'ullee, karaa obboleessa isaaniifi nama Hitsaanaat Hambaa keessaa ta'ee achuma Zimbaabuwee jiraatu tokkoon argachuudhaaf hayyama akka argatan ibsaniiru.
Carraa kana fayyadamuunis waldichi Koloneel Mangistuuf xalayaa nagoomii erguu yaadan. Xalayaa isaaniirrattis guyyaa dhaloota isaanii isa sirrii akka itti himaniif gaafatanii turan.
Obbo Jooniin yeroo sababii isaanii ibsanitti guyyaan dhaloota Koloneel Mangistuufi guyyaa isaan biyyaa ba'an tokkicha (Caamsaa 13) kan jedhu yeroo baayyee waan dubbatamuuf adda baafatanii beekuudhaaf jedhameeti.
Xalayaan koreen waldiuchaa barreessaniif dhimma siyaasaa tokkoyyu hin qabu kan jedhan Obbo Jaaniin, qabiyyeen xalayyichaa kan dhalli abbaa isaatiif barreessudha jedhan.
Kana waan ta'eef, xalayaan sun waa'ee nageenya isaanii, waa'ee ijoollee isanii kan itti gaafatan, akkasumas guyyaa dhaloota isaanii isa sirrii kan itti gaafatan ta'uu ibsu.
"Guyaa dhaloota isaanii kabajuudhaaf malee qorannoodhaaf barbaannee miti," jechuudhaan sababii xalyaa kana barreessaniif dubbatu Obbo Jooniin.
Akka Obbo Jooniin jedhanitti, xalayaa nagoomii sana waliin uffannaan siree aadaa, boca fannaa mana keessatti fannifatan, akkasumas haadha warraa isaanii Wuubaachiifi isaaniif fooxaan aadaa ergameeraaf.
Isaanis akka abbaatti deebii isanii akka erganiif Obbo Jooniin ibsaniiru.
Deebii kennaniin xalayaa isaaniirratti akka ibsanitti haala fayyaa gaarii keessa akka jiraniifi, rakkoo fayyaa yaaddessaa ta'e akka hin qabne ibsaniiru.
Dabalataanis, ijoollee isaaniitiin akka eebbifaman, ijoollee dhala dhalaa shan akka arganiifi yeroo hundaa waa'ee biyya isaanii yaaduun akka dabarsaniifi arguuf akka yaadanis ibsanii dhumarratti guyyaafi bara itti dhalatan xalayaa gabaabduu barreessanii erganiiruuf.
"Kanan dhaladhe Finfinneetti A L I Bara 1933 Caamsaa 19," jechuudhaan xalayicharratti akka barreessaniif ibsan Obbo Jooniin.
Goodayyaa suuraa Xalayaa Koloneel Mangistuu
Waldaan kun waajira akka qabu gaafachuudhaanis saatii kaartaan Afirka irra jiru akka waajira isaanii kaawwataniif erganiiruuf.
Kana qofaa osoo hin taane, kan mallattoon isaanii irra jiru 'Ijoollee Hitsaanaat Hamba' , dubbisa gaarii kan jedhu irratti barreessanii kitaabsa isaanii isa jalqabaa erganiiruuf.
"Hunda caalaa akka ijoolleetti kan nutti dhaga'aman ni jiru, sirnni yeroo isaan turan ture wantonni hin malle raawwatamaniiru, haata'u malee, bara sanatti hojii gaariis hojjetaniiru," kan jedhan Obbo Jooniin sirnni darbe walumaa galatti miira Dargii jedhuun hojiin isaanii badaa akka ta'etti fudhatameera.
kanaaf, waldaan Hitsaanaan Hambaa isaan bara sanatti hojjetan hojiiwwan gaarii keessaati. Hitsaanaat Hambaa hundeessuun isaanii hojii gaarii akka ta'e yaadachuun hojii isanii kaasnee guyyaa dhaloota isaanii kabajachuudhaaf sagantaa qopheeffachuu yaadaa jirra.
Gaafa Caamsaa 18, 2011 ijoolleen Hitsaanaat Hambaa qophii bashannanaa akka dhuunfaatti qopheeffatanirratti guyyaa dhaloota Koloneel Mangistuu kabajaniiru. Haata'u malee, waldaan kun Wixata dhufu Waxabajji 2, 2011 sagantaa kabajaa qopheeffataa akka jiran Jooniin dubbateera.
"Saganticharraatti akkuma guyyaa dhalootaa kamiiyyu keekiifi daabboon ni jiraata, namoota bara sana turaniifi kanneen biroo hafeeruun ho'isnee kabajuuf yaadneerra," jedhan.
Bakkaafi saatii sagantichi itti gaggeeffamu yeroo itti dhiyaannu akka ibsani dubbataniiru.
Walumaa galatti ijoolleen Hitsaanaat Hambaatti guddatan kuma 7 ol yommuu ta'an, kan Finfinnee jiraniifi miseensota waldaa ta'an lakkoofsi isaanii dhibba ja'a akka ta'u walitti qabaan waldichaa Obbo Jooniin ibsaniiru.
Hitsaanaat Hambaa akka maqaa duriitti Shawaa Kifilaagar, Hayiqoochiifi Buttaajiraa Awuraajjaa bakka Allaagee jedhamutti kan hundeeffame yommuu ta'u ijoollee sababii waraanaafi kanneen birootiin maatii isaanii dhaban walitti qabee kaayyoo guddisuu kan qabu ture.